Telecom Industry in Zimbabwe Market Research & Statistics
> Telecom Industry in Zimbabwe Market Research & Statistics
Mobile Services Industry in Zimbabwe
Mobile Messaging Services Industry in Zimbabwe
Mobile Data Services Industry in Zimbabwe
HIV AIDS Statistics in Zimbabwe and Africa - Forecast
(From $ 390 - $ 1350)
Zimbabwe Telecom outlook report is a comprehensive analytical research on the Zimbabwe’s cellular, fixed telephone and fixed broadband segments. Through detailed analysis of the current market conditions ...
Zimbabwe - Telecoms, Mobile And Broadband - Statistics ...
Proposed tariff measures add pressure to Zimbabwe’s mobile market Revenue from Zimbabwe’s telecom sector has come under pressure from a number of recent regulatory measures and taxes imposed by the ...
Zimbabwe - Telecoms Infrastructure, Operators, Regulati ...
June 2017	$ 550
Zimbabwe’s economy has seen a downturn since the fractious elections of July 2013, resulting in a significant fall in GDP growth. The contribution to GDP from the telecom sector has fallen steadily as ...
Zimbabwe - Mobile Infrastructure, Broadband, Operators ...
Growth in Zimbabwe’s mobile market has been hampered by the poor economic climate, exacerbated by recent regulatory measures affecting tariffs and taxes. These burdens have placed greater pressure on ...
Zimbabwe - Fixed Broadband And Digital Economy - Statis ...
The Telecommunications Market In Southern Africa—key ...
December 2014	$ 2450
Key Findings •The most-developed countries with telecommunications penetration rates over x % are Botswana ( x %), South Africa ( x %), Namibia ( x %), Mauritius ( x %), and Zimbabwe ( x %). •Landlocked ...
The Zimbabwe Telecoms Market Report 2015
June 2015	$ 1999
This country report and accompanying data annex provide a comprehensive overview of Zimbabwe's telecoms market, including KPIs and data on subscribers, penetration, revenue and ARPU. The report analyses ...
Zimbabwe Telecommunications Strategic Analysis And Outl ...